Njem gaa n'Ugwu Rocky | Akụkọ Njem
Ha abụghị ndị a ma ama dịka Andes ma ọ bụ Alps, ma ọ bụ dị ebube, mana n'ezie ụwa nke sinima na TV emeela ka ha bụrụ ndị a ma ama. M na-ekwu nke Ugwu Rocky nke dị n'ime North America.
na Ugwu Rocky Ha sitere na United States na Canada ma bụrụkwa ebe a na-ewu ewu na ebe a na-akpọtụrụ ndị mmadụ na akụkụ a nke ụwa. Taa ha bụ akụkụ nke Ugwu Ugwu Rocky, na steeti Colorado.
1 Ugwu Rocky
2 Ugwu National Park Rocky
Ọ bụ usoro ugwu na-agba yiri nke n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri na nwere Ugwu Elbert dị ka ebe kachasị elu, nke dị mita 4401Uhie Emebere ha ọtụtụ nde afọ gara aga, glaciation nke Quaternary Era na site na mbuze nke ikuku na ọrụ mgbawa.
Tupu ọbịbịa nke European colonist ha bụ ndị ka bụ ụlọ nke ndị Indian Indians dị ka cheyennenke apache ma ọ bụ eex, naanị ịkpọ aha ole na ole. N'ebe a ka ha churu bison na mammoths. Ọbịbịa nke ndị na-eme nchọpụta nke Europe na ngwa agha ha, anụmanụ dịka ịnyịnya na ọrịa dị iche iche na-efe efe, gbanwere eziokwu nke ndị a.
E ji nlezianya mụọ sayensị nke Ugwu Rocky site na mbubreyo XNUMX na mmalite narị afọ nke XNUMX. Ihe okike na mineral, ọkachasị ọlaedo, kpaliri ha, otu ihe ahụ maka ebe dị iche iche bidoro ịmalite site mgbe ahụ gawa.
Ugwu National Park Rocky
E guzobere mpaghara a echedoro na 1915 ma nwee ndọtị nke 1.076 square kilomita. Enwere akụkụ ọwụwa anyanwụ na akụkụ ọdịda anyanwụ ma akụkụ abụọ ahụ dị iche. Ọ bụ ezie na nke mbụ akpọrọ nkụ na ọtụtụ glaciers, nke ikpeazụ ahụ bụ mmiri na-ezo na mmiri mmiri, nke mere ka uto nke oke ọhịa dị ukwuu.
N'ime ogige ahụ enwere ihe dị ka elu 60 karịa mita 3.700 dị elu na mmiri 150 nke dị iche iche nha. Ndị kasị ala oru na elu nwere ala ahịhịa juru na oke ọhịa na-eji osisi pine na nke mbu, ma dika ayi nārigo oke ohia Ma ọ bụrụ na anyị na-ama-ekwu okwu banyere ihe karịrị 3500 mita elu, mgbe ahụ, e nweghị ndị na osisi na ala ahịhịa alpine.
Oge kacha mma iji gaa n'ogige ahụ bụ n'oge ọkọchị, n’agbata July na August, ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 ºC, ọ bụ ezie na abalị ka na-ajụ oyi. Ọ na-ada n’agbata Ọktoba na ngwụsị ọnwa Mee. Ogige emeghe 24 awa ụbọchị niile n'afọ, ewezuga ụfọdụ ụbọchị pụrụ iche nke ekwesịrị ịlele na weebụsaịtị, na ụdị tiketi dị iche iche maka onye ọbịa:
1 Day Pass kwa onye: $ 15
Dbọchị asaa gafere onye ọ bụla: $ 7
Enwekwara tiketi maka ugbo ala nwere ihe na-erughị mmadụ 16 ma ọ bụ maka ndị na-eji ọgba tum tum abịa. Na Ebe Nleta Alpine Ọ bụ ebe dị mma ịmalite, na ebe kachasị elu n'ogige ahụ dị mita 3.595, nwere nnukwu echiche nke ndagwurugwu glacial na elu ọnụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye ọtụtụ ozi gbasara ebe ahụ. E nwere ebe ọzọ dị ka nke ahụ, Ogige Nleta Beaver Meadows ebe egosiri ihe nkiri nkeji 20 ma enwere onodu ihu ala nke ogige, gbakwunyere onyinye onyinye na WiFi efu.
Ọzọ esenowo center bụ Ogbe Fall River enwekwara ebe akụkọ ihe mere eme akpọrọ Holzwarth nke na-eme ka anyị laghachi na 20s nke narị afọ gara aga, iji hụ ka ndị mmadụ si ebi n'oge ahụ. A na-emepe ụlọ ebe a n'oge ọkọchị, ma n'oge oyi, ị ga-ahụ ha site na mpụga. Na Kawaneeche itorlọ Ọrụ Ọbịa, n'ebe ugwu nke Grand Lake Village, na-enye map, ikike ịma ụlọikwuu, na ihe ngosi banyere ogige ahụ. Na Ebe Moraine Park Discovery Center Ọ bụ na Bear Lake Road ma na-enye ihe ngosi ya na ụzọ okike nke na-enye echiche dị ebube nke Moraine Park.
Na mgbakwunye na ebe ndị ọbịa a na-ekesa n'ime ime ogige ahụ, onye njem nwere ike ịgbaso dị iche iche ụzọ ụgbọ ala. Ọ bụrụ na ugwu na-amasị gị enwere Okporo Trazọ Okporo ụzọ, okporo ụzọ awara awara na ugwu kachasị elu na mba ahụ, nke gafere Milner Pass. E nwekwara Zọ Osimiri Old Fall, nke ala, mepee site na mmalite nke July ruo na njedebe nke September, n'ihi na o nwere ọtụtụ akụkụ.
Ọzọkwa enwere ọtụtụ ebe picnic na ọtụtụ ohere hiking, inyinya inyinya ma ọ bụ pụọ kampu ma rahụ ụra n'okpuru kpakpando. Ndagwurugwu Kawuneeche bụ ebe mara mma ịga njem ma ọ bụ ebe Holzwarth Akụkọ Ihe Mere Eme na okporo ụzọ Coyote. Ihe a niile dị n’akụkụ ọdịda anyanwụ nke ogige ahụ. O di nwute na idei mmiri nke 2013 bibiri ọtụtụ n'ime ụzọ ndị a ka ihe niile wee nyochaa tupu ebe ndị ọbịa na. ndị nche.
N'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ogige ahụ bụ Mpaghara Bear Lake, nwere ọtụtụ saịtị picnic mara mma, ụzọ ụkwụ na ebe ọhụụ. Enwere ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ n'oge ọkọchị na ọnwa ọdịda. Ọzọkwa ebe a bụ Lily Lake nwere echiche mara mma nke Longs Peak, ọdọ mmiri na-akụ azụ, na ụzọ dị mfe maka ezinụlọ.
Ya mere, ihu ọma Rocky Mountain National Park na-enye nhọrọ maka trekking, ụbọchị nke picnic, kpakpando ehihie na abalị ise na-ama ụlọikwuuma ọ bụ enwere ike ịgba akwụkwọ ruo ọnwa isii tupu oge ahụ, a na-ahapụkwa ogige ndị ọzọ dị larịị, backgba ịnyịnya na ụlọ obibi abụọ mepere site na May na ọtụtụ n'èzí ogige ahụ, njem azu n'ime ọdọ mmiri 50 na ọtụtụ iyi ndị ọzọ, nnụnnụ na-ekiri na anụ ọhịa, ebe ndị ọbịa na-enweta ihe ọmụma banyere nchịkwa mmadụ nke ala ndị a na ọtụtụ mmemme na-ekwupụta ihe ndị a ndị nche ma ọ bụ ranger.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Njem gaa na Ugwu Rocky